Ololaha Metoo oo sabab u noqday kororka dacwadaha faraxumeeynta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ololaha #Metoo ee la isku dhaafsado aaladaha bulshadu ku kulmaan oo haweenku kaga hadlaan meel kaga dhaca xuquuqdooda. sawir: Claudio Bresciani/TT
Ololaha Metoo oo sabab u noqday kororka dacwadaha faraxumeeynta
La daabacay torsdag 7 december 2017 kl 14.39
Guddiga talada ee ka hor-tagga dembiyada ee magaciisa loo soo gaabiyo Brå (Brottsförebygganderådet) ayaa xaqiijiyay iney aad kor ugu kaceen dacwadaha laga gudbiyo kufsiga iyo fara-xumeeynta wixii ka dambeeyay ololihii loogu magac-darey ”Metoo”, sida ay qortay laanta wararka ee idaacadda la iska daawado ee SVT Nyheter.
Intii lagu guda jirey bishii noveembar waxaa la gudbiyey dacwado fara-xumeeyn oo hor leh oo gaarsii-san 868, middaasina oo kor u qaadaysa tiradii dacwadahaa 33% kolka loo barbar-dhigo bishii dhiggeeda ee sannadkii 2016, sida tira-koob hor dhac ah ka muuqata.
-Waxaa muuqata kor u kac ballaaran oo uu sabab u yahay ololaha metoo, sida ay sheegtay Lisa Wallin, baare ka howl-gasha Brå oo wareeysi siisay idaacadda SVT.
Ololaha Metoo ayaa dardar galay bartamihii bishii oktoobar 2017.
-Waxaannu og-soonnahey in ciidanka ammaanka loo gudbiyo qiyaastii mid tobankii fal ee fara-xumeeyn ahba. Hase yeeshee laga yaabo in sidii ololuhu u biloowday loo maareeyo falalka fara-xumeeynta si ka duwan oo dad badani dacwad ka gudbiyaan kolka ay la soo gudboonaato, sida ay sheegtay Lisa Wallin oo ka howl-gasha Brå.
Ololaha Metoo miyaad u aragtaa inuu faa'iido keenay oo loo baahnaa.